कान्ति बाल अस्पतालमा ३ वर्षअघि नै म्याद सकिएको मेसिनबाट सिटी स्क्यान! - News site from Nepal
कान्ति बाल अस्पतालमा ३ वर्षअघि नै म्याद सकिएको मेसिनबाट सिटी स्क्यान!
काठमाडौं–वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा करोडौंमा खरिद गरिएका उपकरण ताला लगाएर राखिएको छ । उता राजधानीकै कान्ति बाल अस्पतालमा म्याद गुज्रिएका उपचारबाट बालबालिकाको उपचार भइरहेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
देशको केन्द्रीय बाल अस्पतालमा एक्सरे पनि १५ वर्ष पुरानो मेसिनबाट हुने गरेको छ। ज्सले निमोनिया भए–नभएको पनि निश्चित गर्न सक्दैन । अस्पतालमा उपकरण थप्न बजेट माग गरेपनि गत वर्ष सरकारले २ करोड ६४ लाख बजेट घटाइदिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
यस विषयमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पत्यारोपण केन्द्रको क्याथ ल्याब सञ्चालन नभएको विषयमा अध्ययन गर्न टोली खटाइसकेको र अन्य अस्पतालको पनि छानबिन गर्न समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली १० घण्टापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको, प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएको । तर, प्रधानमन्त्रीले आज (बिहीबार) हुने श्रद्धाञ्जलीसभामा जानै पर्ने बताएको खबर प्राथमिकताका साथ छापिएको छ ।